Farmaajo oo shuruud ku xiray ka qeyb galka wada-hadallada doorashooyinka - Awdinle Online
Farmaajo oo shuruud ku xiray ka qeyb galka wada-hadallada doorashooyinka
Ilo wareedyo lagu kalsoonyahay oo ku sugan Villa Somalia ayaa ii xaqiijiyay in Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu diiday ka qeyb-galka shirka looga hadlayo doorashada ee ka dhici doono Muqdisho.
Wararka aan ka helay xubnahaan ka tirsan Villa Somalia ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu wakiilada beesha caalamka u sheegay in uusan la kulmi doonin Deni iyo Axmed Madoobe, balse uu kulankaas ka qeyb geli doono markii ay soo dhameestirmaan dhamaan maamulada, hase yeeshee waxaa jira wadahadal hoose oo dhaxmaray MD Farmaajo iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo K/Galbeed oo iyagana diidan imaanshaha shirkaas sida ay wararku sheegayaan.
Qoor-Qoor iyo Lafta-gareen ayaa ku sugan Turkiga waxeyna wararku sheegayaan in aysan imaan doonin shirkaas iyagoo sababtuna ku sheegay in wakiilada beesha caalamka ay dad muhiim ah u yaqaanaan kuwa diida shirarka ee siyaasada ka macaasha sida ay hadalka u dhigeen. Diidmada Qoor Qoor iyo Lafta-gareen iyo sharuuda Madaxweyne Farmaajo ee ah in shirka loo dhameestiro maamulada ayaa loo arkaa iska warqab iyo heshiis hoose.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa hore u diiday ka qeyb galka 3 shir oo uu Iclaamiyay Madaxweyne Farmaajo waxa uuna shirka hada ka dhacayaa Xalane oo ay labadaan Madaxweyne ku taliyeen. Wakiilada beesha caalamka ayaa wada dedaal xal looga helayo caqabahada taagan.
Previous articleMadaxweynaha Puntland oo gaaray Muqdisho
Next articleWasiir Caafimaad oo isku casilay Bukaano u geeriyooday Ogsijiin la’aan